Fametrahana demokrasia sy tany tan-dalàna: mamaha ny olan’ny fananan-tany sy ny resaka politika ny HCDDED | NewsMada
Fametrahana demokrasia sy tany tan-dalàna: mamaha ny olan’ny fananan-tany sy ny resaka politika ny HCDDED
Tsy misy mahafantatra firy. Nidina ifotony nampahafantatra ny antom-pijoroany sy ny andraikitra raisiny ny eo anivon’ny Filankevitra ambony ho an’ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna. Anisan’ny nitondran’izy ireo famelabelarana narahina fanontaniana ny tao Behenjy, distrikan’Ambatolampy, omaly.
“Anjatony ireo fitarainana voarainay ka olan’ny fananan-tany ny antsasak’izany. Ny ambiny, manodidina ny resaka politika, toy ny hosoka na ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fifidianana depiote farany teo”, hoy ny filohan’ny HCDDED, i Pierre Le Noble. Nitondra ny famelabelarana tamin’izany ny tenany ka nilazany fa afaka mametraka avokoa fitarainana ny ny olon-tsotra na ny fanjakana na koa ny tsy miankina. Mandalo dingana izany amin’ny alalan’ny fandihinan’ny vaomiera ny tranga miseho.
Hosoka tamin’ny fifidianana
Tompon’ny fanapahan-kevitra farany kosa ny fivoriambe iraisan’ny mpikambana rehetra. “Nivaha ny ankamaroan’ny olana eo amin’ny fananan-tany. Ny olana tamin’ny fifidianana kosa, manahirana io ka mbola arahinay hatramin’izao ny momba izany. Tsy mbola afa-po izahay ”, hoy ihany izy. Niaiky ny HCDDED fa mbola lavitra ezaka ny fampahafantarana ny asan’izy ireo eny ifotony. Tsy mbola misy rahateo ny rantsan’ity rafitra ity eny anivon’ny faritra. Notsiahivin’izy ireo tamin’izany ny antom-pijoroan’ny HCDDED. Anisan’izany ny tsy firindran’ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao. Ny tsy fanajana ny lalàna sy ny zon’olombelona ary koa ny tsy fisian’ny demokrasia. “Anisan’ny niteraka ny krizy niverimberina teto ireo. Eo koa ny tsy firindran’ny fanjakana tsara tantana sy ny kolikoly na ny tsy fanajana lalàmpanorenana, ny fanodinkodinam-bolam-panjakana ka nahatonga ny nampijoroana ity rafitra iray ity”, hoy ny sojabe, Imbiky Anaclet, tamin’ny famelabelarany.
Fanafainganana ny raharaham-pitsarana
Nanteriny koa fa afa-mandray andraikitra avy hatrany amin’ny tranga hitany koa izy ireo. Tsy voatery hiandry fitarainana na fitoriana. “Tsy afaka manova didim-pitsarana kosa anefa izahay, saingy raha nahitana trangana kolikoly izany, tsy maintsy miditra an-tsehatra… Anisan’ny ataonay koa ny fampirisihana ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana”, hoy ihany izy.
Ankoatra izany, nisy ny fanontanian’ireo mpanatrika ka anisan’izany ny resaka fitsaram-bahoaka, ny dina sy ny lalàna. Notsiahivin’izy ireo fa midika ho tsy fahatokisana ireo rafitry ny filaminana sy ny fandriampahalemana ny anton’izany. Ohatra, ny zandary sy ny polisy ary ny fitsarana.
Ho arofanina ny mpanohitra…
Hametraka ho fanamby hampihenana izany ny HCDDED amin’ny alalan’ny fampahafantarana hatrany ny lalàna. Azo ampiharina koa ny dina rehefa tsy mifanohitra amin’ny lalàna ka nankatoavin’ny fanjakana. “Tsy misalovana ny asan’ny hafa izahay fa manara-maso ny asan’izy ireny ary mampahatsiahy. Anisan’izany ny fanajana ny zon’olombelona raha ampitahaina ny HCDDED sy ny CNIDH”, hoy ihany izy ireo. Momba ny resaka fanoherana kosa, nambarany fa ilaina ny mpanohitra ho arofanin’ny mpitondra sy hampivoatra ny firenena. “Tsy mazava anefa fa manjavozavo ny ambaran’ny lalàmpanorenana milaza ny satan’ny mpanohitra na ny fanoherana ka izao asiam-panovana izao…” hoy izy ireo.
Hitohy any amin’ny faritra hafa ny hetsika fampahafantarana ny HCDDED, taorian’ny tany Behenjy.